Kama dambeysta tartanka degmooyinka oo la dheelli doonno xilli habbeen ah | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Kama dambeysta tartanka degmooyinka oo la dheelli doonno xilli habbeen ah
Kama dambeysta tartanka degmooyinka oo la dheelli doonno xilli habbeen ah
Muqdisho (SONNA):- Madaxa cayaaraha maamulka gobalka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Yabarroow Wiish, ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee SONNA, in kama dambeysta koobka degmooyinka oo loo ballansanaa galabta in loo dhiggay habeen dambe.
Wiish, ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii muddo kaddib Muqdisho loogu ciyaari lahaa waqti habbeen ah, waxa uu intaa ku sii daray inay heer gabogabo ah ay mareyso shaqadda nalleeynta ee garoonka Banaadir.
“Maamulka gobalka Banaadir, waxaa ka go’an horumarinta kubadda cagta gobalka, waxaan go’aansanay in la dheello xilli habbeen ah, 80%, waxaan ku kalsoonnahay in waqti habbeen ah la ciyaaro kama dambeysta koobka degmooyinka gobalka Banaadir.” Xasan Wiish guddoomiyaha cayaaraha maamulka gobalka Banaadir ayaa warkan u sheegay SONNA.
Waberi iyo Hodan ayaa noqon doonno 30-sanno kaddib kuwa ciyaaro waqti habbeen ah.
FG: Halkan ka dhageyso Wareysiga Xasan Wiish
Previous articleXildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka oo soo dhaweeyay Go’aankii Xukuumadda
Next articleShirka Golaha Wasiirrada oo lagu ansixiyey Hindise Sharciyeedka Batrooka iyo Heshiiska Isu-celinta Maxaabiista ee India iyo Soomaaliya
Saraakiisha ciidamada Talyaaniga iyo spain ee jooga Soomaaliya oo qalab isboortis gudoonsiiyey ciyaartowda Gobolka Banaadir.
Xulka Gobolka Banaadir oo ku guuleystay tartanka Dowlad Goboleedyada iyo Banaadir+(SAWIRRO).
Xulka Banaadir oo u soo gudbay kulanka kama dambeysta ah ee tartanka maamul Goboleedyada+(SAWIRRO).